2. အနှုတျ - 129 ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျက ကမ်ဘာပျေါက အအေးဆုံး အပူခြိနျပါ။
ကမ်ဘာပျေါမှာ အအေးဆုံးအပူခြိနျက အနှုတျ - 129 ဒီဂရီဖာရငျဟိုကျ ဖွဈတယျလို့ သတျမှတျထားပါတယျ။ ဒီအပူခြိနျက အန်တာတိကတိုကျ Vostok စခနျးမှာ 1993 ခုနှဈ၊ ဇူလိုငျလ 23 ရကျနရေဲ့ နှရောသီ အပူခြိနျ ဖွဈပါတယျ။
2. အနှုတ် - 129 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်က ကမ္ဘာပေါ်က အအေးဆုံး အပူချိန်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အအေးဆုံးအပူချိန်က အနှုတ် - 129 ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် ဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအပူချိန်က အန္တာတိကတိုက် Vostok စခန်းမှာ 1993 ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ 23 ရက်နေ့ရဲ့ နွေရာသီ အပူချိန် ဖြစ်ပါတယ်။